Apple Campus 2 Vhidhiyo yeMwedzi | Ndinobva mac
Hapana kana mwedzi unoenda kuti hatina mifananidzo mitsva yeiyo inotarisirwa Apple Campus 2 muguta reCupertino uye ikozvino tave Chikunguru vhidhiyo yemwedzi inowanikwa. Pachiitiko ichi tichaona kufambira mberi munzvimbo yekupaka nemagetsi ayo ezuva, mukuiswa kwemakristuru echivako cheovhoriyamu, imba yekutonga uko kuratidzwa kwezvigadzirwa zvechiratidzo zvichaitika, nzvimbo dzekuitira vashandi pamwe nevamwe vese iro basa mune rakanakisa mhando.
Iye zvino tave nekutumirwa kwemwedzi uno (kubvira nezuro) uye iri basa razove chinangwa chikuru cheiyo vashandisi vane yavo drone, rekodhi, yekugadzirisa uye kurodha mavhidhiyo kuYouTube.
Iyi ndiyo montage yaMateu Roberts yakatumirwa nezuro pane yake YouTube chiteshi uko iri kuita ndege pamusoro pematenga eApple Campus 2 pamwedzi:
Zviripachena muvhidhiyo ino tinoona kufambira mberi kwakasiyana kwebasa uye hazvifanire kucherechedzwa kuti kunze kwaro kunotove neakafanana dhizaini kune iyo yatakaona pakutanga mumhando dzakaratidzwa naCook kuzviremera zveCupertino. Chokwadi ndechekuti chivakwa chinosiya parutivi kana iri Apple kana kwete, zvinoita sekunge isu rinoshamisa uye rakakura basa reinjiniya.
Muvhidhiyo zvimwe zvinonakidza zveiyi ndege yedrone zvinoratidzwa uye anoshanda wenjodzi dzakafanana zvishoma nekusvika padenga reichi chivakwa. Apple naTim Cook pachirongwa chekufambisa kufamba Pakangotanga 2017 kutanga paCampus 2, saka mune rinosara regore iyo yakaoma ichaona kwekupedzisira kubata kune rakakura basa rakaitwa ipapo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple Campus 2 vhidhiyo yemwedzi waJuly
Tweetbot yeMac iri kutengeswa kwenguva yakati rebei